မို့မို့ – Hlataw.com
မို့မို့… ဒီလူကြီးကို ကြည့်လို့မရ.. မျက်နှာကြောကို မတည့်.. လူကောင်ကြီးက ကြီးသလောက် စကားသံက ချွဲချွဲနဲ့ … သူ့နာမည်က မျိုးဝင်းသူတဲ့… မမခင်သီတာကလည်း တစ်မျိုး.. ဘယ်လိုနားလည်ရမှန်း မသိ.. မို့မို့ မျက်နှာကြောမတည့်သော လူကြီးက မမနှင့် အိမ်မှာ အတူလာနေမယ် တဲ့… မမ ယောက်ျားယူမှာလားလို့ မေးတော့… “ မို့မို့..နားမလည်သေးပါဘူး ညီမလေးရယ်…” တဲ့.. ပြီးတော့ မို့မို့ ငယ်သေးတယ် တဲ့..မို့မို့ မငယ်တော့ဘူးလို့ ပြန်ပြောချင်လိုက်တာ … မပြောရဲလို့.. မို့မို့ အသက် (၂၀) နှစ်ထဲ ရောက်နေပြီ.. အပျိုဖြစ်တာတောင် နှစ်ကျော်နေပြီ.. အဲဒီလူကြီးက ဘယ်လောက်ကြာအောင် လာနေမှာလဲ လို့မေးတော့ မသိသေးဘူးတဲ့.. ကောင်းရော…ရှင်.. အရင်တုန်းက အဲဒီလူကြီး အိမ်ကို ခဏခဏလာဘူးတယ်.. မို့မို့ကို ဆက်ဆံတာ သူငယ်နှပ်စားလေးလို ဆက်ဆံသလိုဘဲ.. မကြိုက်ပါဘူး… ပြီးတော့ ရှိသေးတယ်..
လူကိုကြည့်ရင် မျက်နှာကို ကြည့်ပေါ့.. အခုတော့ ..သူက ဒီလို မဟုတ်ဘူး.. မို့မို့ တစ်ကိုယ်လုံးကို အရမ်းစိတ်ဝင်စား(အရမ်းနှာဗူးထ ) နေတဲ့ မျက်လုံးမျိုးကြီးနဲ့ ကြည့်တတ်တာ.. အဲဒီအချိန်မျိုးဆို…မို့မို့ နေလို့အရမ်းခက်တာ.. သူ့ရှေ့မှာ လူတစ်ကိုယ်လုံး အဝတ်တွေ မပါတော့သလိုပဲ.. မျက်နှာတွေ ထူပူ ၊ တစ်ကိုယ်လုံးလည်း ရှိန်းဖိန်းလို့… နှာဗူး…ကြီး.. ကဲ..အဲဒီလို လူကြီးက အိမ်မှာလာနေမယ်တဲ့.. မို့မို့သိပါတယ်.. ဒီလူကြီး အိမ်မှာလာနေရင် မမနဲ့ အတူတူ အိပ်မယ်ဆိုတာကိုလေ… မို့မို့ စိတ်ညစ်တယ်.. မမကိုလည်း မပြောရဲဘူး.. မမ ခင်သီတာက မို့မို့ရဲ့ အစ်မအရင်းခေါက်ခေါက်တော့ မဟုတ်ပေမယ့် တစ်ဝမ်းကွဲ အစ်မ.. ပြီးတော့ မို့မို့ကို မိဘလို စောင့်ရှောက်လာခဲ့သူ..မို့မို့ (၄) နှစ်သမီးလောက်က မို့ အဖေနဲ့ အမေ ၊ နောက်… မမခင်သီတာရဲ့ အဖေနဲ့ အမေ ၊ မမရဲ့ အစ်ကို .. သူတို့အားလုံး တွံတေးတူးမြောင်းထဲမှာ သင်္ဘောနစ်တဲ့ ထဲ ပါသွားကြသည်.. အဲဒီနောက် မို့မို့ကို မမခင်သီတာက ပြုစုပျိုးထောင် လာခဲ့ရသည်.. ဒီတော့ မို့မို့က မမခင်သီတာကို မလှန်ရဲတာလည်း မဆန်းပေ.. အဲဒီ မျိုးဝင်းသူ ဆိုတဲ့ လူကြီး အိမ်မှာလာနေရင်..ဘယ်လို ဆက်ပြီး စခန်းသွားရပါ့မလဲ ဟူသော အတွေးတွေက မို့မို့ စိတ်တွေကို ညစ်နွမ်းစေလေသည်.. အစိမ်းရောင် မီးလုံးလေးက ဖိုက်ဝပ်လေးပဲ ဖြစ်ပေမယ့် အမှောင်ကြီးစိုးမှုကြောင့် အခန်းထဲတွင် လင်းလင်းထိန်ထိန် ဖြစ်နေသည်..
မျိုးဝင်းသူက ခင်သီတာ၏ အင်္ကျီကျယ်သီးလေးတွေကို တစ်လုံးချင်းဖြုတ်ရင်း အိပ်ရာပေါ်တွင် မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်နေသော ခင်သီတာ၏ တစ်ကိုယ်လုံးကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေသည်.. ခင်သီတာမှာ ရှက်ရွံ့ အားနာသော မျက်နှာလေးဖြင့် မျိုးဝင်းသူကို ကြည့်ရင်း… “ အို..အို….နေပါစေ…ကိုဝင်းရယ်…သီတာ့ဘာသာ ဖြုတ်ပေးပါ့မယ်…” ဟု ပြောရှာသည်.. “ ရှက်မနေပါနဲ့…သီတာရယ်….ကိုဝင်းဖြုတ်ပေးပါ့မယ်…ဟုတ်လား…” ပြောရင်း မျိုးဝင်းသူက ရဲရဲတင်းတင်းပင် ဖြုတ်ပစ်လိုက်လေရာ ဘရာစီယာလေး မလုံမလဲ ကာကွယ်ထားသော ခင်သီတာ၏ ရင်သားနှစ်မွှာမှာ ရုန်းကန်၍ ထွက်လာတော့ရာ ဒါကို ကြည့်ရင်း မျိုးဝင်းသူ၏ မျက်လုံးများ ဝင်းလက်၍ သွားသည်.. “ သီတာက သိပ်လှတာပဲ…ဒါကြောင့် ကိုဝင်းက သိပ်ချစ်နေမိတာ…” မျိုးဝင်းသူက ပြောရင်း သူမ၏ ဘရာစီယာလေးရော ထမီပါ ဆွဲ၍ချွတ်ပစ်လိုက်လေ တော့ရာ ခင်သီတာ မျက်နှာလေး ရဲကနဲ ဖြစ်သွားရလေသည်..
သူမ၏ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ပေါင်ရင်းမှ အတွင်းခံအသားကပ် ဘောင်းဘီပန်းရောင်လေးမှ လွဲ၍ ဖြူဖွေးပြီး ဝင်းဝါသော အသားဆိုင်တွေက မျိုးဝင်းသူ၏ စိတ်တွေကို ထလို့မဆုံးအောင် ဖြစ်နေစေပေသည်.. “ အို…ကွယ်….ကိုဝင်းကလဲ ဘာလို့ ဒီလောက်တောင် ကြည့်နေရတာလဲ…” လက်ကလေး နှစ်ဖက်ကို ရင်သားပေါ် ယှက်တင်ရင်း ခင်သီတာက ရှက်ရွံ့စွာဖြင့် မျက်စောင်းလေး ထိုးကာပြောလိုက်သည်.. “ နေပါအုံး…သီတာရယ်…ကိုဝင်းအားရအောင် ကြည့်ပါရစေအုံး..သီတာ တစ်ကိုယ်လုံးက တကယ့်ကို ချစ်စရာကြီး…ဟင်းဟင်း….ကိုယ်တော့ သိပ်ချစ်နေပြီ…အချစ်ရယ်.. သိပ်ချစ်ချစ်နေပြီ….” မျိုးဝင်းသူက တုန်ရင်သော အသံကြီးဖြင့် တတွတ်တွတ်ပြောရင်းက ခင်သီတာ၏ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကို ဆွဲချွတ်လိုက်ရာ..လက်လေးဆစ်ခန့် ဟသွားပြီး အတွင်းမှ ဝင်းဝါသော ဖားခုံညှင်းသဏ္ဍာန် မို့မို့ဖောင်းဖောင်း အသားပြင်လေးက အမွှေးအမျှင် ကင်းရှင်းစွာဖြင့် ထွက်ပေါ်လာသည်..
မျိုးဝင်းသူမှာ စိတ်ကို မချုပ်တီးနိုင်တော့သည့်အလား သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးအား ကြုံးဖက် ပွေ့ယူ၍ သူ၏ ရင်ခွင်ထဲသို့ ဆွဲသွင်းလိုက်ကာ ကျော့ရှင်းသော သူမ၏လည်တိုင်လေးကို အငမ်းမရ နမ်းလိုက်ရာ… ခင်သီတာမှာ တစ်ကိုယ်လုံး တွန့်လိမ်သွားပြီး မျက်နှာလေးကို မော့၍ နီတာရဲ နှုတ်ခမ်းလွှာလေးနှစ်လွှာက ပွင့်ဟ၍ လာသည်.. မျိုးဝင်းသူက ခင်သီတာအား နှုတ်ခမ်းချင်း တေ့၍ အသက်အောင့်ကာ ခပ်ပြင်းပြင်း စုပ်ယူလိုက်ရာ ခင်သီတာမှာ မျက်လုံးများ ပြာဝေသွားရတော့သည်.. ထို့နောက် မျိုးဝင်းသူက သူမ၏ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကို ဆွဲချွတ်ရာတွင် အလိုက်သင့်လေးဖြစ်အောင် ခင်သီတာက အယ်နေသော ဖင်ကြီးကို ကြွ၍ပေးသဖြင့် ဘောင်းဘီလေးမှာ လွယ်ကူစွာ ကျွတ်ထွက်သွားပြီး သူမ၏ ကိုယ်လုံးတစ်ခုလုံး ဘာအဝတ်အစားမှ မရှိတော့ပဲ ကိုယ်တုံးလုံးကြီး ဖြစ်သွားရတော့သည်.. မျိုးဝင်းသူသည် ခင်သီတာ ကိုယ်လုံးလေးအား မွေ့ရာပေါ်သို့ အလိုက်သင့်လေး ချပေးလိုက်သောအခါတွင်တော့ ခင်သီတာ၏ ရှိုက်ဖိုကြီးငယ်အသွယ်သွယ် တို့မှာ မီးရောင်စိမ်းလဲ့လဲ့အောက်ဝယ် မြင်ရသူ အသက်ရှူမှားလောက်အောင် အလှကြီး လှနေပါတော့သည်..
ဝင်းဝါသော အသားစိုင်များအောက်ဝယ် ပိတုံးရောင် ဆံနွယ်လေးများက ဖယိုဖရဲလေး ကျနေသောကြောင့် ခင်သီတာ၏ အလှမှာ စာဖွဲ့ရန်ပင် ခက်လောက်အောင် မျိုးဝင်းသူ၏ စိတ်တွေကို ပူလောင်ပြင်းပြလာစေလေသည်.. ဖောင်းမို့ မောက်ကြွလျက်ရှိသော သူမ၏ ရင်သားနှစ်မွှာမှာလည်း သူမမှာ ပက်လက်လေး ဖြစ်နေ၍ နံဘေး တစ်ဖက်တစ်ချက်ဆီသို့ အိစက်နေကြလင့်ကစား သိသိသာသာကြီးပင် မို့မောက်ကုံးထနေပြီး အသက်ရှူလိုက်တိုင်း နိမ့်ချီမြင့်ချီဖြင့် လှိုင်းများထလို့နေသည်.. မျက်စိအောက်ဝယ် ထင်ထင်ရှားရှား ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် မြင်နေရသော ခင်သီတာ၏ အလှတွေကြောင့် မျိုးဝင်းသူ၏ ရင်ထဲမှာ ရမ္မက်မီးက အလျှံတငြီးငြီး တောက်လောင်လာခဲ့ပြီး မုန်ယိုနေသော ဆင်ရိုင်းကြီးတစ်ကောင်ပမာ ဖြစ်လာကာ သူ၏ ကိုယ်ပေါ်မှ အဝတ်အစားများကို ချွတ်ခွာချလိုက်တော့ရာ… တုတ်ခိုင်သော သူ၏ လီးကြီးမှာ ဖြောင့်တန်းထောင်မတ်စွာ ထွက်ပေါ်လာလေတော့သည်..မျိုးဝင်းသူသည် သူမ၏ ကိုယ်ဘေးတွင် အလိုက်သင့် ဝင်အိပ်လိုက်ပြီး နောက် ခင်သီတာ၏ နို့သီးလေးများကို ပါးစပ်ဖြင့် အငမ်းမရ တပြွတ်ပြွတ် စုပ်ယူလိုက်ရာ..ခင်သီတာခမျာ.. ရင်ဘတ်ကြီး ကော့တက်လာလျက် တစ်ကိုယ်လုံးလည်း မရိုးမရွကြီး ဖြစ်၍ လာရတော့သည်.. သူမ၏ မျက်နှာကို ကြည့်လိုက်တော့ ရမ္မက်ခိုးလေးတွေ ရီဝေနေသည့် မျက်လုံးများဖြင့် သူ့အား ပြန်ကြည့်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်.. မျိုးဝင်းသူက သူမ၏ နီရဲရဲ နှုတ်ခမ်းလေးကို စုပ်ယူလိုက်ပြန်သည်.. “ ချစ်တယ်..နော်….သီတာ…” “ ချစ်တာပေါ့…..ကိုဝင်းရယ်…” ခင်သီတာ၏ ညှို့မြူတောင့်တသော အသံလေးက မျိုးဝင်းသူ၏ ရင်ကို လှုပ်ခတ်စေသည်.. ထို့နောက် မျိုးဝင်းသူက ခင်သီတာ၏ အိတင်းပြီး ထိရက်စရာ မရှိသော ပေါင်တန်ထွားထွားကြီးများအား သူ၏ ဒူးခေါင်းကြီးဖြင့် ထိုးကာခွဲလိုက်ပြီး ပေါင်တန်ဖွေးဖွေးကြီးများ အကြားသို့ ဝင်လိုက်သည်..
ထိုအခါ ခင်သီတာ၏ ပေါင်ကြားခွဆုံမှ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ဟက်တက်ကွဲသွားပြီး အဆင်သင့်ဖြစ်နေလေသည်.. မျိုးဝင်းသူသည် အစွမ်းကုန် မာန်ထနေသော သူ၏ လီးတန်ကြီး ထိပ်ဖူးအား ညာလက်ဖြင့် ကိုင်လိုက်ပြီး နောက် ခင်သီတာ၏ စောက်ဖုတ် အကွဲကြောင်းကြီးကြားမှ တွင်းဝလေးဆီသို့ ဖိကပ်၍ ထောက်လိုက်သည်.. “ အို..ဟင့်…ဟင့်…..” ခင်သီတာ၏ ကိုယ်လုံးလေး တွန့်ခနဲ ဖြစ်သွားသည်.. ထို့နောက် လီးကို အားနှင့် အသာဖိ၍ သွင်းလိုက်ရာ စောက်ခေါင်းထဲသို့ တထစ်ထစ်နှင့် နစ်ကာ ဝင်သွားတော့သည်.. “ ဗြစ်….ဗြစ်….အင့်…အင့်…အင်း…ဗြစ်…ဗြစ်…..ဟင်း ဟင်း………” ခင်သီတာမှာ မျိုးဝင်းသူ၏ ကျောပြင်ကြီးအား သူမ၏ သွယ်တန်းသော လက်လေနှစ်ဖက်ဖြင့် သိုင်းဖက်ထားပြီးနောက် တဟင်းဟင်းဖြင့် ညီးညူနေလေသည်..မျိုးဝင်းသူက လီးကို တစ်ခါတည်း အရင်းထိ ဖိမသွင်းသေးဘဲ တဝက်လောက်အရောက်တွင် ရပ်ထားလိုက်ပြီးနောက်.. အသာပြန်၍ ဆွဲနှုတ်လိုက်ရာ..ခင်သီတာ၏ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားများမှာ လီးနှင့် ကပ်၍ လန်ကာ ပါလာလေသည်.. ထို့နောက် ဒစ်ပေါ်သည်အထိ ဆွဲထုတ်ကာ ပြန်၍ ဖိသွင်းလိုက်ပြန်သည်.. ထိုအတိုင်း ထပ်ကာထပ်ကာဖြင့် ငါးကြိမ်မျှ လုပ်ပေးလိုက်ရာ ခင်သီတာ၏ စောက်ခေါင်းလေးအတွင်းမှ အရည်ကြည်လေးများ စိုပြီး စိမ့်ထွက်လာလေသည်.. ထို့ကြောင့် မျိုးဝင်းသူက သူ့လက်များကို ခင်သီတာ၏ ချိုင်းအောက်မှ လျှို၍ ပခုံးကို ခပ်တင်းတင်း ကိုင်ဆွဲ၍ လီးကို အဆုံးထိ ဆောင့်သွင်းချလိုက်လေသည်..
“ ဗြစ်…ဗြစ်…ဒုတ်….အိ…..အိ….အင့်…ကျွတ်ကျွတ်….အ…အား…“ ခင်သီတာ၏ ပါးစပ်မှ ညည်းညူသံလေးများ တကျွတ်ကျွတ် ထွက်ပေါ်လာလေသည်. “ ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ…ကိုရယ်…” “ နာလို့လား…ဟင်…သီတာ..” “ ဟင့်အင်း…..ဟင့်အင်း…..” ခင်သီတာက ခေါင်းလေးကို ရမ်းပြလိုက်သည်.. ထို့ကြောင့် မျိုးဝင်းသူက အားတက်လာပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်ချလိုက်ပြန်သည်.. “ ပြွတ်….ဗြစ်….ပလွတ်….ပြွတ်…..ဟင့်…အင့်…..” ခင်သီတာ၏ မျက်တောင်ကော့ကြီးများမှာ စင်းကျနေပြီး အောက်နှုတ်ခမ်းလေးမှာ ပြုံးယောင်သန်းနေသည်.. ဒါပေမယ့် မျိုးဝင်းသူက အားမရသေးပါ.. “ အားမရသေးဘူး အချစ်ရယ်…” သူ၏ ပါးစပ်ကို ခင်သီတာ၏ နားတစ်ဖက်သို့ဖိကပ်၍ ခပ်တိုးတိုးလေးပြောလိုက်သည်..“ ဟင့်…..ကိုကလဲ ကွယ်….” “ ချစ်လို့ပါ သီတာရယ်…ကို..အားရအောင် လုပ်ပါရစေနော်…” “ ဟင်း…ကိုကတော့ သိပ်ကဲတာပဲ…သဘော သဘော…သီတာက ကိုစိတ်တိုင်းကျ ချစ်တာကို ခံရမဲ့သူပါ..ကိုရယ်…” မျိုးဝင်းသူမှာ ခင်သီတာ့စကားကြောင့် ပီတိဖြစ်သွားသည်.. “ ဟင်း…ဒါကြောင့် သီတာ့ကို သိပ်ချစ်နေရတာ…” တုန်ယင်သောအသံဖြင့် ပြောရင်း သူမ၏ ပါးမို့မို့လေးကို သွက်သွက်ကြီး နမ်းလိုက်သည်.. ထို့နောက် ခေါင်းအုံးတစ်လုံးအား ဆွဲယူပြီး ခင်သီတာ၏ ကားစွင့်အိစက်ကာ လိုးရက်စရာ မရှိသော တင်သားထွားထွားကြီးများအောက်သို့ ထိုး၍ခုလိုက်ရာ ခင်သီတာ၏ ခါးလေးမှာ ကော့တက်လာပြီးနောက် ဆီးခုံလေးမှာ ပို၍ မောက်လာလေသည်.. မျိုးဝင်းသူ၏ လီးကြီးက အရင်းမှ အဆုံးတိုင်မြုပ်နေပြီး အဖျားက သားအိမ်ဝကို ထောက်ကာ ခင်သီတာ ရင်ထဲ ကျဉ်နေအောင် ခံစားရသည်..
ခင်သီတာက ပေါင်တန်ကြီးကို ကား၍ ဒူးကိုထောက်ကာ ဖြဲပေးလိုက်မိသည်.. မျိုးဝင်းသူသည် ကာမရမ္မက်မီးကြောင့် မျက်တောင်များ စင်းကျနေသည့် ခင်သီတာ၏ မျက်နှာလေးအား သူ၏ ရီဝေသော မျက်လုံးကြီးများဖြင့် စူးစူးဝါးဝါး ကြည့်နေရာမှ အံကို ခဲကာ ကြိတ်လိုက်ပြီးနောက် ခင်သီတာ၏ ပခုံးအား အားယူ၍ဆွဲကာ ကုတင်တစ်ခုလုံး သိမ့်ကနဲသိမ့်ကနဲ ဖြစ်သွားသည်အထိ ခပ်ကြမ်းကြမ်း လိုးတော့သည်.. “ ဗြစ်….ဒုတ်…အ….အ…..ဟင့်…ဗြစ်….ဒုတ်….ပြွတ်……” ခင်သီတာကလည်း သူမ၏ တင်သားကြီးများကို အချက်ကျကျ ပြန်၍ ကော့တင်ပေးနေပြန်ရာ နှစ်ဦးသားမှာ အရသာတွေ့၍ ကာမကြောတွင် နစ်မြောနေကြလေသည်.. နောက်ဆုံးမှာတော့ နှစ်ဦးသား ကာမအရသာ၏ အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိသွားကြပြီး တစ်ဦးကိုယ် တစ်ဦး လွတ်ထွက်သွားမည် စိုးသည့်အလား ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုကြား လေမဝင်နိုင်အောင် တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီး ပွေ့ဖက်၍ ထားလိုက်ကြလေသည်. မောဟိုက်နွမ်းနယ်သော သက်ပြင်းချသံကြီးများ က ဟင်းကနဲ ဟင်းကနဲ ပေါ်ထွက်လာကြသည်..
“ သီတာ….” မျိုးဝင်းသူ၏ အသံ ခပ်ပြင်းပြင်းလေး ပေါ်ထွက်လာသည်.. “ ကို…..” “ ကိုတော့ သီတာ့ကို တကယ်ပဲ စွဲမိနေပြီ…အချစ်ရယ်…သီတာရော ကိုယ့်ကို မချစ်ဘူးလား ဟင်…သီတာနဲ့ ခွဲသွားရမှာတောင် ကြောက်နေပြီ…” ခင်သီတာက မျက်လုံးများကို မှိတ်ကာ မှိန်း၍ နားထောင်နေမိသည်.. ထိုအချိန်ဝယ် စောက်ခေါင်းထဲမှ အံ၍ကျလာသော သုတ်ရည်များက သူမ၏ တင်ပါးဆုံကြီးနှစ်ခုကြားသို့ တစိမ့်စိမ့် စီး၍ ကျလာသည်.. “ လွှတ်ပါအုံး ကိုရယ်….ဟိုဟာတွေ သုတ်ပါရစေအုံး….” ခင်သီတာက ပြောလိုက်သဖြင့် သူမ၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် မှောက်၍အိပ်နေရာမှ သူမ၏ ပါးလေးတွေကို ခပ်ဖွဖွနမ်းပြီး မထချင်ထချင် သူမ၏ကိုယ်ပေါ်မှ ဆင်းလိုက်သည်.. လီးကြီးက ပြွတ်ခနဲ နေအောင် ကျွတ်ထွက်သွားသည်.. “သီတာ…ကိုယ့်ကို မချစ်ဘူးလား…လို့….” မျိုးဝင်းသူက အိပ်ရာပေါ်တွင် ပက်လက်မှိန်းနေရာမှ ခင်သီတာအား ပြန်၍ မေးလိုက်သည်. သူ၏လီးကြီးမှာ အရည်များဖြင့် စိုနေပြီး ပျော့ခွေ၍ ကျနေသည်..ခင်သီတာက အဝတ်ဟောင်းတစ်ထည်ဖြင့် သူမ၏ပေါင်ကြားမှ ပေကျံနေသော အရည်များကို သုတ်နေရင်းမှ မျိုးဝင်းသူအား မျက်လုံးလေးထောင့်ကပ်ကာ ကြည့်လိုက်ရင်း… “ ချစ်တာပေါ့….ကိုရဲ့….၊ ကဲ…သူ့ဟာကြီးကို ပေနေတာတွေ သုတ်ပေးအုံးမယ်…” ဟုပြောကာ မျိုးဝင်းသူ၏လီးကြီးကို အဝတ်ဖြင့် သုတ်ပေးလိုက်သည်.. မျိုးဝင်းသူက သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ဆတ်ခနဲဆွဲကာ ရင်ခွင်ထဲသို့ သွင်းလိုက်သည်.. ထို့နောက် ခင်သီတာ၏ ပြောင်းနွဲ့သော ခါးလေးကို သူ့လက်များဖြင့် သိုင်းဖက်လိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းချင်း တေ့ကာ အားရပါးရ စုပ်ယူလိုက်သည်.. ခင်သီတာမှာ မျက်လုံးလေးများ စင်းကျသွားပြီးနောက် မျိုးဝင်းသူ၏ ကျောပြင်ကြီးကို ပြန်၍ ဖက်တွယ်ထားသည်..
သူမ၏ ဖောင်းမို့အိစက်သော ရင်သားများက မျိုးဝင်းသူ၏ ရင်ဘတ်ကြီးကို ဖိကပ်နေသဖြင့် တစ်ဦး၏ ရင်ခုန်သံကို တစ်ဦးက ကြားနေရလေသည်.. အတန်ကြာတော့မှ… “ ချစ်… နောက်တစ်ခါ လုပ်ကြရအောင်…” “ နေပါအုန်း.. ကိုရယ်..ကို အမောပြေအောင် ခဏ နားပါအုန်းလား…သီတာ ဘယ်မှ ထွက်မပြေးပါဘူး.. တစ်ညလုံး လုပ်လို့ရပါတယ်….ကိုရဲ့….ကို့ဟာကြီးကို သီတာ ကိုင်ကြည့်အုန်းမယ်…” ပြောပြောဆိုဆို.. သီတာက မျိုးဝင်းသူ၏ လီးကြီးကို သူမ၏ လက်ကလေးများဖြင့် သေသေချာချာ ဆုပ်ကိုင်ကာ ပွတ်သပ် ဆော့ကစားသလို ပွတ်သပ်ဆုပ်နယ်ကြည့်နေသည်.. မျိုးဝင်းသူ၏ လီးကြီးက ခင်သီတာ၏ လက်ထဲတွင် တဖြေးဖြေး ထ၍ တင်းတောင်လာရတော့သည်.. ဒါကိုကြည့်၍ ခင်သီတာက ကျေနပ်အားရစွာ ပြုံးလိုက်သည်..“ ကဲ…ကို့ဟာကြီး ကလည်း မြန်လိုက်တာကွယ်…ထလာလိုက်တာ..ဒီတစ်ခါတော့..သီတာ့အလှည့်ပေါ့..” ခင်သီတာက ခပ်ညုညုလေးပြောရင်း ပက်လက်လှန်ကာ ပေါင်တန်ကြီးများ စင်း၍ အိပ်နေသော မျိုးဝင်းသူ၏ ကိုယ်ပေါ်သို့ တက်ခွလိုက်ရင်း ဆောင့်ကြောင့်လေး ထိုင်ချလိုက်သည်.. ပြီးတော့မှ သူမ လက်တစ်ဖက်ဖြင့် မျိုးဝင်းသူ၏ လီးကြီးကို မြဲမြံစွာ ဆုပ်ကိုင်ရင်း သူမစောက်ဖုတ်အဝသို့ တေ့ကာ အက်ကွဲကြောင်းတစ်လျှောက် လေးငါးချက်မျှ ပွတ်ဆွဲကလိနေသည်.. သူမ၏ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးနှစ်လွှာမှာ ကွဲဟဟလေး ဖြစ်၍ နေပြီး မျိုးဝင်းသူ၏ ထိုးထိုးထောင်ထောင်ကြီး ဖြစ်၍နေသော လီးတန်ကြီးနှင့် တဲ့တဲ့မတ်မတ်ကြီး ဖြစ်၍နေလေရာ ခင်သီတာသည် လီးထိပ်ဖူးကြီးအား သူမ၏ စောက်ပတ်ဝတွင် ထိုးသွင်မြှုပ်နှံလိုက်ပြီးနောက် အသာဖိ၍ ထိုင်ချလိုက်ရာ မာကျောတောင့်တင်းနေသော လီးတန်ကြီးမှာ အိကနဲ အရင်းသို့တိုင်မြုပ်၍ ဝင်သွားလေရာ မျိုးဝင်းသူက အားမလိုအားမရနှင့်ပင် လီးကြီးကို အပေါ်သို့ မြှောက်ကော့ ပင့်တင်ပေးလိုက်မိလေသည်..
“ ဗြစ်…ပလွတ်…ဗြစ်…ဒုတ်….” ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ရေဆေးငါးကြီးပမာ ကျော့ရှင်းလှပနေသော ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် အလှကြီးလှနေသော ခင်သီတာ၏ ကိုယ်လုံးလေးက သူ့အပေါ်သို့ အုပ်မိုးနေရုံမျှမက အောက်ပိုင်းမှာလည်း လီးတန်ကြီးက သူမ၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ တစ်ချောင်းလုံး တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဝင်၍နေလေရာ မျိုးဝင်းသူမှာ ကာမစိတ်များ တရိပ်ရိပ် တက်လာရလေသည်.. ခင်သီတာသည် သူမ၏ ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကို မျိုးဝင်းသူ၏ ရင်ဘတ်ကြီးပေါ်သို့ အုပ်မိုး မှောက်ချထားလိုက်ပြီး သူမ၏ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကို ခပ်ဖြေးဖြေး အထက်အောက် ဖိချလိုက် မြှောက်တင်လိုက်ဖြင့် လှုပ်ရှားပေးနေရာ မျိုးဝင်းသူအဖို့ တသိမ့်သိမ့် တစိမ့်စိမ့်နှင့် ကာမအရသာကို အစွမ်းကုန်ပင် ခံစားတွေ့ထိနေရတော့သည်.. ခင်သီတာ၏ စောက်ခေါင်းလေးကလည်း ဆွဲငင်ဓါတ် တစ်မျိုး ရှိနေသည်…တဖျတ်ဖျတ်ဖြင့် သူမ၏ စောက်ခေါင်းထဲမှနေ၍ သူ့လီးတန်ကြီးကို ရစ်ပတ်ကာ ဆွဲ၍ စုပ်ယူလိုက်သကဲ့သို့ ခံစားရသဖြင့် အတွေ့မှာ ထူးလွန်းလှသည်.. “ ပြွတ်..ဗြစ်…ပလွတ်…ပြွတ်….ဗြစ်…” “ ကောင်းရဲ့လား…ကိုရယ်…” ခင်သီတာက ပြုံးတုံ့တုံ့မျက်နှာပေးလေးဖြင့် မျိုးဝင်းသူအား ကြည့်ကာ မေးလိုက်သည်.. “ ကောင်းတာပေါ့ ..သီတာရယ်…သိပ်ကောင်းတာပဲ…ဒါကြောင့်လဲ ကိုဝင်း သီတာ့ကို မခွဲနိုင်တော့တာပေါ့…” မျိုးဝင်းသူက ကာမခိုးများ ရီဝေနေသော မျက်လုံးများဖြင့် ခင်သီတာအား ကြည့်ကာ ပြန်ပြောလိုက်သည်. လက်ကလည်း ခင်သီတာ၏ တင်ပါးထွားထွားအိအိကြီးကို အရသာခံကာ ဆုတ်ညှစ်ကိုင်တွယ်၍ နေသည်.. ခင်သီတာကလည်း အလိုက်သိစွာဖြင့် ခပ်ပြင်းပြင်းလေးဖိ၍ဖိ၍ ဆောင့်ပေးနေရာမှ သူမ၏ ကြီးထွားမို့မောက်သော ရင်သားနှစ်မွှာအား မျိုးဝင်းသူ၏ မျက်နှာပေါ်သို့ ဝဲ၍ ဖိချပေးလိုက်ရာ မျိုးဝင်းသူက အငမ်းမရ စုပ်ယူလိုက်ရာ နို့သီးခေါင်းလေးများမှာ မာတင်းထောင်တက်နေပြီး ခင်သီတာ၏ တစ်ကိုယ်လုံးမှာလည်း တဟင်းဟင်းဖြစ်လာကာ သူမ၏ တင်ပါးကြီးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် ဆောင့်၍ ပေးလိုက်သည်..
ထို့နောက် ခင်သီတာက လီးတန်ကြီးကို အရင်းထိမြုပ်သွားအောင် သူမ၏ ဆီးခုံလေးနှင့်ဖိကပ်ထားရင်းက မျိုးဝင်းသူ၏ ပါးပြင်အား သူမပါးပြင်လေးနှင့် မှေးကာ ကပ်ထားလိုက်သည်.. သူမ၏ စောက်ခေါင်းအတွင်းမှလည်း ချွဲကျိသော အရည်များက စိမ့်ထွက်လာပြီး မျိုးဝင်းသူ၏ ဆီးခုံပေါ်သို့ တသွင်သွင် စီးကျလာသည်.. ခင်သီတာ၏ နွမ်းဟိုက်သော သက်ပြင်းချသံလေးမှာ ဟင်းကနဲ ထွက်ပေါ်လာသည်.. မျိုးဝင်းသူက အောက်မှနေ၍ သူမ၏ ခါးလေးကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ပွေ့ဖက်ထားလိုက်လေသည်.. “ သီတာ…ပြီးသွားပြီမို့လား..” “ အင်း..သူများ…မောပြီကွယ်…” ခင်သီတာက သက်ပြင်းချသံလေးနှင့်အတူ ပြန်ပြောလိုက်သည်.. “ ဒါဖြင့် …သီတာ နားချင် နားအုံးလေ…” “ အို…ကိုမှ မပြီးသေးတာ…ဟာ…” “ ကိစ္စ မရှိဘူး…ကိုတစ်လှည့်လုပ်ပေးအုံးမှာပေါ့…” ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့် မျိုးဝင်းသူက ခင်သီတာ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ဘေးသို့လှိမ့်ချလိုက်ရာ စောက်ခေါင်းထဲမှ လီးတန်ကြီးက ပြွတ်ကနဲ ပြန်၍ ကျွတ်ထွက်သွားသည်..မျိုးဝင်းသူက သူ၏လီးတန်ကြီးတွင်ပေကျံနေသော ခင်သီတာ၏ သုတ်ရေများကို အဝတ်ဟောင်းတစ်ထည်ဖြင့် သုတ်ပစ်လိုက်ပြီးနောက်… ခင်သီတာအား ဖက်ကာ ပါးပြင်လေးနှစ်ဖက်ကို သွက်သွက်လေး နမ်းလိုက်သည်.. “ သီတာ…ဒူးထောင်ပြီး ကုန်းပေးနော်…” ခင်သီတာကလည်းအလိုက်သိစွာဖြင့် သူမ၏ ဒူးနှစ်ဖက်ကိုထောက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကို မှောက်၍ချလိုက်ရာ သူမ၏ ဖြူဖွေးအိစက် တင်းကားနေသော တင်ပါးကော့ကော့ကြီးမှာ အထက်သို့ မောက်ကားကော့ထောင်နေပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးကလည်း နောက်သို့ ပြူးထွက်နေလေသည်.. မျိုးဝင်းသူက သူမ၏ ကော့ကော့ထွားထွား တင်ပါးကြီးနောက်မှနေ၍ ဒူးထောက်လိုက်ပြီး နောက်သို့ပြူးထွက်နေသော ခင်သီတာ၏ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်လွှာအား လက်မနှင့်ဖြဲ၍ သူ၏ လီးတန်ကြီးကို တေ့လိုက်ပြီးလျှင် သူမ၏ နွဲ့နှောင်းသော ခါးလေးကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့် အားရပါးရဆွဲကိုင်ကာ ဆောင့်သွင်းချလိုက်သည်..
“ ပလွတ်….ဗြစ်….ဒုတ်…အ…အမေ့…..” ခင်သီတာမှာ အရှိန်ဖြင့် ရှေ့သို့ ငိုက်ဆင်းကျသွားရသည်.. “ ဖြေးဖြေး လိုးပါ…ကိုရယ်…” ခင်သီတာက တောင်းပန်သံလေးနှင့် ပြောလိုက်သော်လည်း မျိုးဝင်းသူကတော့ ရမ္မက်ရှိန်ကို မထိန်းနိုင်တော့သည့်အလား ခင်သီတာ၏ တင်ပါးကြီးကို တင်းတင်းဆွဲဆုပ်ကာ အငမ်းမရပင် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်၍ဆောင့်၍ လိုးတော့သည်.. “ ဗြစ်…ပလွတ်…ဗြစ်…ဒုတ်…ဗြစ်..အင့်…အင့်…အမေ့….ဗြစ်..ဒုတ်…အင့်..ဟင့် ” မျိုးဝင်းသူက ဆောင့်၍လိုးနေရင်း အားမလိုအားမရ ဖြစ်လာဟန်ဖြင့် ခင်သီတာ၏ ခပ်ကားကားထောက်ထားသော ဒူးနှစ်လုံးကို ဆွဲစိလိုက်ရာ စောစောက ဟက်တက်ကလေးကွဲဟနေသော သူမ၏ စောက်ပတ်ကြီးမှာ စေ့သွားပြီးကျဉ်းကြပ်သွားရာ လီးတန်ကြီးကို ဖိညှစ်၍ ထားလေသည်.. ထိုအခါတွင် သူမ၏ စောက်ပတ်မှာ မျိုးဝင်းသူ၏ လီးတန်ကြီးကို အားနှင့် ညှစ်ဆုပ်ထားသလိုဖြစ်ကာ အရသာရှိလှသည်..မျိုးဝင်းသသူက သူမ၏ ရင်သားများကို လှမ်း၍ ညှစ်ဆွဲလိုက်ကာ အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် အားရပါးရ ဆောင့်လေရာ ခင်သီတာမှာလည်း တင်ပါးကြီးများကို စည်းချက်ကိုက်အောင် နောက်သို့ ပစ်ပစ်ပြီး ကော့ဆောင့်ပေးနေမိတော့သည်.. “ ပြွတ်…..ပလွတ်…ဗြစ်…..ဗြစ်…ဟင့်..ဟင့်…ပြွတ်….ဖွတ်…အင်း…ဟင့်…” နောက်ဆုံးတော့ မျိုးဝင်းသူ၏ လီးတန်ကြီးအတွင်းမှ ပူနွေးသော သုတ်ရည်များက စစ်ကနဲစစ်ကနဲ ပန်းထွက်လာပြီး သူမ၏ သားအိမ်အတွင်းသို့ ပန်းဝင်သွားလေတော့ရာ ခင်သီတာမှာ တဟင်းဟင်း ညီးရင်း မောဟိုက်နွမ်းနယ်စွာ အိပ်ရာပေါ်သို့ ဝမ်းလျားမှောက်၍ ကျသွားတော့သည်.. မျိုးဝင်းသူမှာလည်း သူမ၏ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို မလွတ်တမ်းဆွဲထားရင်း သူ၏ လီးကြီးကို အတင်းဖိကပ်ထားကာ ခင်သီတာ၏ ကိုယ်ပေါ် ထပ်ဖိထားရင်း အမောဖြေနေသည်..
“ မို့မို့….ညက အိပ်ပျော်ရဲ့လား…” “ ဟင်….အို….” ကုတင်စောင်းတွင် ထိုင်၍ ငေါင်နေသော မို့မို့တစ်ယောက် အသံလာရာသို့ ကြည့်လိုက်တော့ အိပ်ခန်းထဲသို့ ဝင်ကာသူမထံသို့ လျှောက်လာသော မျိုးဝင်းသူကို တွေ့လိုက်ရပြီး အို ကနဲ ရှက်သွေးဖြာ၍ ခေါင်းလေး ငုံ့ထားလိုက်မိသည်.. ညက မမခင်သီတာနှင့် မျိုးဝင်းသူတို့ဆီမှ အသံများကို ကြားရသဖြင့် မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်လာ၍ ဂျက်ချမထားသော မမတို့အခန်းကို အသာဟပြီး ချောင်းကြည့်မိခဲ့သည်.. ဒါကို ဒီလူကြီး တွေ့ဖြစ်အောင် တွေ့သွားတာ ဖြစ်မည်.. “ ပြောပါအုံး…မို့မို့ရဲ့…အိပ်ပျော်ရဲ့လား..လို့…” သူမ၏ အနားတွင်ရပ်လိုက်သော မျိုးဝင်းသူက သူမ၏ ဆံပင်လေးတွေကို လက်ဖြင့် သပ်တင်ပေးရင်း သူမ၏မျက်နှာလေးကို ကြင်နာစွာလေး ငုံ့၍ကြည့်ရင်း ထပ်၍မေးလိုက်သည်.. “ မသိဘူး…” “ ဟဲဟဲ…မို့မို့က ကိုယ်တို့ကို ချောင်းကြည့်ပြီး ….ခံချင်နေတာ မဟုတ်လား…” မျိုးဝင်းသူက မို့မို့၏ ပခုံးသားလုံးလုံးလေးတစ်ဖက်ကို လက်ဖဝါးဖြင့် ဆုပ်ရင်း မေးသည်.. မို့မို့ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်းခုန်ကာ တစ်ကိုယ်လုံး တုန်ရင်ချင်လာသည်.. မို့မို့ကို ကြည့်ရင်း မချင့်မရဲဖြစ်လာသော မျိုးဝင်းသူက သူမ၏ ကိုယ်လုံးကလေးကို ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲသွင်းပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး နမ်းလိုက်သည်..
“ အို…ကျွတ်..ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ…မမ တွေ့သွားလိမ့်မယ်…” “ သီတာ ခုလေးတင် ဈေးသွားဝယ်တယ်..တစ်နာရီကျော်လောက်မှ ပြန်လာမှာ…” ပြောလည်းပြော မျိုးဝင်းသူက သူမ၏ အဝတ်အစားတွေကို ဆွဲချွတ်သည်. မို့မို့ ဘာမှမပြော.. ရုန်းဖယ်ခြင်းလည်း မပြု.. ညကထဲက သူတို့ကို ကြည့်ရင်း မျိုးဝင်းသူက သူမကို တစ်ခုခုလုပ်ရင်ကောင်းမှာပဲ ဟု ခဏခဏ တွေးမိနေခဲ့တာပဲ.. မို့မို့က တစ်ကိုယ်လုံး အဝတ်အစားတွေ ကင်းကွာသွားရော..မျိုးဝင်းသူက သူ့ကိုယ်ပေါ်က အဝတ်တွေကိုပါ ချွတ်လိုက်သည်.. ပြီးတော့… မို့မို့အား သူ့ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲသွင်းလိုက်ပြီး အငမ်းမရ နမ်းရင်းက နို့လေးတွေကို ညှစ်သည်.. “ ဟင့်…ဟင့်….ဦးကလဲနော်… ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲ…..ဟင့်…” စိတ်မရှည်စွာဖြင့် ညည်းပြောလေး ပြောလိုက်ပြီး မို့မို့က သူမ၏ စောက်ပတ်အုံပေါ်ရှိ ပူနွေးမာတောင်နေသော လီးတန်ကြီးအား လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်သည်.. ပြီးတော့ မချင့်မရဲ ဖြစ်လာပုံဖြင့် မို့မို့က သူမ၏ ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ဖြဲကားလိုက်ပြီး လီးထိပ်ကို စောက်ပတ်ဝတွင် တေ့ကာ သူမ၏ ဖင်ကြီးကို ကော့တင်လိုက်စဉ် မျိုးဝင်းသူကလည်း ဖိ၍ သွင်းလိုက်တော့ရာ.. လီးကြီးမှာ စောက်ခေါင်းထဲသို့ တစ်ဝက်လောက် တိုးဝင်သွားလေသည်..
” ဗြစ်…ဗြစ်.အိုး…အီး….ဗြစ်..အ….အင့်…” “ ဗြစ်…ဗြစ်…အီး…ဟီး….အား..အား…ပြွတ်….ဗြစ်..” “ မို့မို့.. နာနေလား…” လေးငါးချက်လောက် ခပ်သွက်သွက်လေး လိုးပေးအပြီးတွင် မေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်.. “ ဟင့်အင်း….ရတယ်…ရပါတယ်….ဆောင့် ဆောင့်…မို့မို့ မနာဘူး..ခံနိုင်တယ်..” ဖင်ဆုံကြီးကို ပြန်ကြွပေးရင်း မို့မို့က ပြောလိုက်သည်.. မျိုးဝင်းသူက မို့မို့၏ ပခုံးသားလေးများအား ချိုင်းကြားမှ လျှို၍ ဆွဲကိုင်ကာ သူမ၏ နှုတ်ခမ်းလေးကို ငုံစုပ်ကာ ကြပ်ကြပ်တည်းတည်း တိုးဝင်နေသော လီးတန်ကြီးကို ဖိဖိသွင်းနေရသည်မှာ အရသာ ထူးလှသည်.. မို့မို့၏ မွှေးကြိုင်နုအိလှသော လုံးလုံးကျစ်ကျစ် ကိုယ်လုံးလေးကို ဖက်ထားရသည်မှာ နွေးထွေး စီးပိုင်၍ အရသာ ရှိလှသလို… ဖောင်းအိနေသော စောက်ခေါင်းလေးကလည်း ဝင်နေသော လီးတန်ကြီးကို မဆန့်မပြဲ ငုံထားရသဖြင့် ရှိရင်းစွဲထက် ပိုမိုဖောင်းကြွ၍ နေကာ လီးကြီး ဖိဝင်သွားတိုင်း ချိုင့် ချိုင့်ဝင်သွားရပြီး လီးထွက်လာတိုင်း စူကြွ၍ ပါလာကြသည်.. အဝင်အထွက်လုပ်နေသော လီးတန်ကြီးကို နေရာမပေးနိုင်သည့် စောက်ခေါင်းအတွင်းသားများက လီးတန်ကြီးကို အတင်းပင် ရစ်ပတ်ထားလေရာ မျိုးဝင်းသူမှာ အရသာတွေ ကောင်းကောင်းတွေ့နေလေသည်..မို့မို့၏ ဖင်ကြီးကို မွေ့ရာထဲ အိကျသွားအောင် ဝိုက်၍ ဆောင့်နေပြီး ကောင်းသထက်ကောင်းလာကာ တစ်ချက်တစ်ချက် အဆုံးထိဝင်နေပြီး ဆီးခုံချင်း တဖတ်ဖတ်ရိုက်သံက စည်းချက်ကျကျ ထွက်ပေါ်၍ လာသည်.. မို့မို့ကလည်း သူမ၏ ပေါင်တန်လေးနှစ်ဖက်ကို အစွမ်းကုန်ကား၍ ပေးထားလေသည်.. သူမ၏ ဖင်ဆုံကိုလည်း အပေါ်က ဆောင့်ချက်နှင့် အညီ ပြန်ကော့ပေးမိသည်.. သူမ၏ စိတ်ထဲမှာလည်း မရိုးမရွနှင့် အရူးအမူး ဖြစ်ကာ မျိုးဝင်းသူ၏ ကျောပြင်ကြီးကို လွတ်ထွက်သွားမှာ စိုးသည့်အလား အတင်းပင် ပြန်ဖက်ထားမိသည်.. ထို့ကြောင့် ဆောင့်ချက်ပြင်းပြင်းနှင့် လီးအဝင် ပိုများကာ ဆီးခုံချင်း ပူး၍ ပူး၍ ကပ်သွားရသည်.. “ ဗြစ်…ဗြစ်…ဗြစ်. ဟင်း ဟင်း…ဗြစ်…ဟင်း…ဟင်း..” လီးတန်ကြီးတစ်ခုလုံး ဝင်နေပြီမို့ စောက်ခေါင်းထဲတွင် ဆို့ကြပ်စွာ ခံစားနေရလေသည် သို့ရာတွင် ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက် လုပ်နေသော လီးကြီးက အရူးအမူးဖြစ်လောက်စရာ အရသာများကို ပေးနေသည် မာတင်းနေသည့် လီးတန်ကြီးက စောက်ခေါင်းအတွင်းသားများအား ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပွတ်တိုက်နေမှုသည် သူမ၏ ရင်ထဲတွင် ဗြစ်ကနဲ ဗြစ်ကနဲပင် ခံစားနေရလေသည်
လေးလံသော ကိုယ်လုံးကြီးက အပေါ်က ဖိဆောင့်ပေးနေမှုကို၎င်း၊ ကြီးထွားရှည်လျားလှသည့် လီးတန်ကြီးအား မဆန့်မပြဲနှင့် ကျဉ်းကြပ်လှသည့် ဖောင်းဖောင်းအိအိ စောက်ပတ်လေးထဲသို့ မညှာမတာ အဆုံးထိ ဖိသွင်းခြင်းကိုသော်၎င်း၊ လီးဝင်လီးထွက် ဆောင့်ချက်များက စောက်ခေါင်းထဲ အောင့်သက်သက် ဖြစ်နေသည်ကို၎င်း၊ မို့မို့ မမှုတော့..၊ မညည်းညူတော့ပဲ ကျေကျေနပ်နပ်ပင် အချက်ကျကျ ကော့ကော့ပြီး… အလိုးခံလျက် ရှိလေသည် “ မို့မို့…. ကောင်းလားဟင် ” “ ကောင်းတယ် ဦးရယ်… နဲနဲတော့ အောင့်သေးတယ်.. ဒါပေမယ့် မို့ ခံနိုင်ပါတယ်… ဦးဟာကြီးက အရှည်ကြီးပဲနော်… မို့ ချက်နားအထိ ရောက်သလား မသိဘူး..၊ ပြီးတော့ ကျင်လိုက်တာ .. မို့ဟာလေး အရမ်းနာကျင်အောင် ခံစားရတယ် သိလား… ” ဆောင့်ချက်ကို ရပ်၍ ဆီးခုံချင်းဖိကပ်ကာ ပြောနေကြခြင်းဖြစ်သည်.. “ မို့ .. မခံနိုင်ရင် ပြော… ဦး လျှော့ လိုးမယ်.” “ အော်…ဦးကလဲ ခံနိုင်ပါတယ်… ဒီလောက်အထိခံပြီးပြီပဲဟာ…လိုးမှာသာ လိုးစမ်းပါ..” မို့မို့ က ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး ပြောလိုက်သဖြင့် ခဏနားနေမှုကို ရပ်ကာ မျိုးဝင်းသူက ခပ်ဖြေးဖြေး ဆောင့်သည်. သူမ၏ ပခုံးသားတင်းတင်းလေးကို ဆွဲပြီးလိုးနေရာမှ သူမ၏ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက် မွေ့ရာပေါ်သို့ လက်ထောက်ကာ လိုးဆောင့်သည်..“ ဗြစ်…ဗြစ်….အင့်…အင်း….ဗြစ်…” လူလုံးချင်းကွာသွားသဖြင့် ဖောင်းနေသော စောက်ပတ်အုံသေးသေးလေးထဲသို့ ကြီးထားရှည်လျားသော လီးတန်ကြီး တစွပ်စွပ်နှင့် တိုးဝင်နေပုံမှာ မို့မို့ စိတ်ထပြီးရင်း ထချင်နေစရာ မြင်နေရလေသည် မျိုးဝင်းသူကလည်း မြင်နေရသလို မို့မို့လည်း မြင်နေရခြင်း ဖြစ်သည်.. မနက်ဖက်အလင်းရောင်အောက်တွင် နှစ်ယောက်သား တက်ညီလက်ညီ လိုးနေခံနေကြလေသည် “ ဦး….မို့ကို ခုလို နေ့တိုင်း လုပ်ပေးမှာလား…ဟင်…” မျိုးဝင်းသူ ပြုံးလိုက်သည် ကောင်မလေး အရသာ သိသွားပြီး တန်းတန်းစွဲ သွားတော့မှာကို သိလိုက်ရသည်
“ လုပ်ပေးမှာပေါ့…မို့ရဲ့..” “ အင်း…မမ .. မရှိတဲ့ အချိန်မှ လုပ်ရမှာနော်..” “ ဒါပေါ့…မို့ရဲ့…. သူသိလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ…” “ နောက် ရှိသေးတယ်.. ဦး မမကို မလုပ်နဲ့တော့ မို့ ကိုပဲ လုပ်ရမယ်..” “ အာ…ဒါကတော့….” မျိုးဝင်းသူ စိတ်ထဲ .. မိန်းမတွေများ ဟု တွေးရင်း ပြုံးလိုက်မိပြန်သည် “ တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်နေပေါ့..ဘာလဲ မို့ကို လုပ်ရတာ မကောင်းလို့လား…” “ ဟာ….ဟုတ်ပါဘူး….မို့ရဲ့..” နှုတ်ခမ်းစူ၍ မျက်စောင်းလေးထိုးပြောတော့ မျိုးဝင်းသူ ပြာပြာသလဲ ပြန်ပြောသည်“ ဦး အကြိုက်ပြော…သိလား… မို့ အကုန်လုပ်ပေးမယ်…” “ ဟဲဟဲ…ဟဲ….” မျိုးဝင်းသူ ပုံစံပြောင်းသည် မို့မို့၏ ဖြောင့်စင်းသော ပေါင်တန်လေးနှစ်ချောင်းကို တံကောက်ကွေးမှ လက်ဖြင့် မတင်လိုက်သည်.. မွေ့ရာနှင့် ကပ်နေသော ဖင်လေးက ကြွတက်သွားပြီး စောက်ပတ်လေးက ပို၍ စူဖောင်းထွက်လာသည် ဖောင်းအိနေသော စောက်ပတ်အုံလေးထဲသို့ လီးကြီးကို အဆုံးထိ စိုက်စိုက်ထိုးချသည်. လီးဝင်ကာ အလိုးခံနေရသော မို့မို့အတွက် ကျင်ကနဲ ကျင်ကနဲ ခံစားလိုက်ရသည်.. သို့သော် မို့မို့ မအော် .. မညည်း..၊ မရုန်း ၊ နာကျင်နေမှုကို ဂရုမစိုက်တော့ပဲ အရွယ်နှင့် မလိုက်အောင် မဆန့်မပြဲ မတန်တဆ လီးနှင့် စောက်ပတ်အတွေ့ကို မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီး ကြိတ်မှိတ်၍ ခံနေလေသည် နာခြင်း၊ အောင့်ခြင်းထဲတွင် ကောင်းခြင်း၊ ဆိမ့်ခြင်းများ ပါဝင်နေသည်ကို သူမသိရှိခံစား နေရလေပြီ ဖြစ်လေသည်..တံကောက်ကွေးနှစ်ဖက်ကို မ၍ လှန်တင်ပြီး ခပ်တင်းတင်း ချုပ်ကိုင်ကာ ဝက်တုပ် တုပ်သလို ချုပ်ပြီး စိတ်ပါလက်ပါ အားပါးတရ မညှာတမ်း ဆောင့်လိုးနေသော မျိုးဝင်းသူမှာ ကောင်းသထက်ကောင်းလာပြီး …၊ ပြီးချင်လာချေပြီ..မကြာမီမှာပင် တစ်ကိုယ်လုံးရှိ အကြောအချဉ်များ ဖြိုးဖြိုးဖျင်းဖျင်း ဖြစ်လာပြီး စောက်ခေါင်းလေးထဲ ကြပ်ကြပ်တည်းတည်း နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း တိုးဝင်နေသော လီးတန်ကြီးမှ ပူနွေးပျစ်ချွဲသော သုတ်ရည်များ ပန်းထွက်သွားစဉ်မှာပင် .. မို့မို့ ခမျာမှာလည်း မျိုးဝင်းသူက အတင်းဖိထားသည့် ကြားမှ ကော့တက်လာပြီး တဟင်းဟင်းဖြင့် တစ်ကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ် တုန်တက်ကာ စောက်ခေါင်းထဲမှ သုတ်ရည်များ ပန်းထွက်ကုန်လေတော့သည်.. ပြီးနောက်….မျိုးဝင်းသူ၏ လည်ပင်းကြီးကို လှမ်းဆွဲချကာ နှုတ်ခမ်းလေး စူပေးကာ ခေါင်းလေး မော့ပေးလိုက်တော့သည်… ပြီးပါပြီ…